Myanmar Gospel Song "ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သီချင်း- ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော် မြေကြီးပေါ် ရောက်လာ" Choir
Myanmar Gospel Song "ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သီချင်း- ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော် မြေကြီးပေါ် ရောက်လာ" Choir
Added 1 year ago by Admin in Gospel SOngs
????ဤအရာကို အွန်လိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့ လေ့လာနိုင်ဖို့ မိတ်ဆွေထံမှ ကျွန်ုပ်တို့ ကြားလိုပါသည်။
????သခင်ပြန်ကြွလာပြီးဖြစ်ကာ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော် တည်ပြီဟု လူများစွာတို့က ခံစားခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စစ်မှန်သော နောင်တကို မည်သို့ ရရှိပြီး၊ ဘုရားသခင်၏ ကွယ်ကာမှုကို ခံရကာ၊ ဘေးဒုက္ခများ မတိုင်မီ မည်သို့ ချီဆောင်ခံရနိုင်သနည်း။ ဤအရာကို အွန်လိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့ လေ့လာနိုင်ဖို့ မိတ်ဆွေထံမှ ကျွန်ုပ်တို့ ကြားလိုပါသည်။
Myanmar Gospel Skit 2020 (သခင် တံခါးခေါက်နေသည်) Welcome the Return of the Lord
Myanmar Christian Skit(ဘုရားသခင်ရဲ့ နာမတော်သစ်)When the Lord Returns, Will He Still Be Called Jesus?
အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသော နိုင်ငံတော် သီချင်းသည် လူတို့ကြား ဘုရားသခင် ကြွရောက်ခြင်းကို စကြဝဠာတစ်ခွင်လုံးဆီ ကြေငြာရင်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော် တည်လေပြီ။ လူအားလုံး ရွှင်မြူးကြသည်။ အရာခပ်သိမ်း ဝမ်းမြောက်ကြသည်။ ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးက အရာရာတိုင်းသည် ပျော်ရွှင်မြူးထူးသံဖြင့် ပြည့်နှက်လေသည်။ အဘယ်မျှ ညို့ယူဖမ်းစားသော ဝင့်ကြွားခြင်း မြင်ကွင်းများ ဖြစ်လိုက်ပါသနည်း။
နာကျင်မှုတွင် အသက်ရှင်ပြီး စာတန်၏ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းကို နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာ ကြံ့ကြံ့ခံခဲ့သူ လူကြားတွင်၊ အဘယ်သူသည် ဘုရားသခင်၏ ကြွရောက်ခြင်းကို မတောင့်တ၊ မတမ်းတဘဲ ရှိသနည်း။ ခေတ်ကာလတစ်လျှောက် ဘုရားသခင်၏ ယုံကြည်သူများနှင့် နောက်လိုက် မည်မျှသည် စာတန်၏ လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်၊ ဆင်းရဲဒုက္ခ၊ အခက်အခဲ၊ နှိပ်စက်ညှင်းပန်းမှုနှင့် ဖယ်ကြဉ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါသနည်း။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော် မကြာခင် ကြွလာတော့မည်ကို မည်သူ မမျှော်လင့်ဘဲနေသနည်း။ လူသားမျိုးနွယ်၏ ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့် ဝမ်းနည်းခြင်းတို့ကို မြည်းစမ်းရင်းဖြင့်၊ သမ္မာတရားနှင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းက လူကြားတွင် တန်ခိုးအာဏာကိုင်စွဲသည်ကို လူသားမျိုးနွယ်ထဲက မည်သူက ဆန္ဒမရှိဖြစ်ပါသနည်း။
နိုင်ငံတော် ကြွရောက်လာသည့်အခါ၊ တိုင်းနိုင်ငံများနှင့် လူများအားလုံးက အလွန်အမင်း စောင့်ဆိုင်းကြသည့် နေ့ရက် နောက်ဆုံးတွင် ရောက်လာမည်။ ထိုအချိန်တွင် ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးပေါ်ရှိ အရာခပ်သိမ်းတို့ကြားတွင် မည်သည့် မြင်ကွင်းများ ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း။ နိုင်ငံတော်ထဲက အသက်တာသည် မည်မျှ လှပလိမ့်မည်နည်း။ “ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သီချင်း- ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော် မြေကြီးပေါ် ရောက်လာ” နှင့်အတူ နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာ ဆုတောင်းချက်များ အမှန်ဖြစ်လာမည်။
အရှေ့အရပ်မှ လျှပ်ပြက်ခြင်း၊ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင် အသင်းတော်ရဲ့ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း နှင့် လုပ်ဆောင်မှု၊ သခင်ယေရှုဘုရား၏ ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်း၊ နောက်ဆုံးသောကာလရှိ ခရစ်တော်တို့ကြောင့် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင် အသင်းတော်ဖြစ်သည့် အရှေ့အရပ်မှ လျှပ်စီးကို ဖန်တီးခဲ့ပါသည်။ နောက်ဆုံးသောကာလများတွင် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်၏ လုပ်ဆောင်မှုများကိုလက်ခံသည့်သူများအားလုံး နှင့် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့် သိမ်းပိုက်စိုးမိုးပြီး ကယ်တင်ခြင်းခံရသောသူများဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကိုယ်တိုင် အားလုံးကိုတည်ထောင်ခြင်းဖြစ်ပြီး သိုးထိန်းကဲ့သို့သူကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ လူသားတဦးအားဖြင့် ဖန်တီးခဲ့ခြင်း လုံးဝမဟုတ်ပါ။ ခရစ်တော်သည် သမ္မာတရား၊ လမ်းခရီးနှင့် အသက်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ သိုးများသည် ဘုရားသခင်၏ အသံကိုကြားပါသည်။ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဖတ်နေသရွေ့ ဘုရားသခင်သည် ပေါ်ထွန်းခဲ့ကြောင်း သင်သိရှိရလိမ့်မည်။
အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင် အသင်းတော်: https://my.godfootsteps.org/
အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင် အသင်းတော် အပလီကေးရှင်းကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန် ကြိုဆိုပါသည်။App
CAG Hymns - နိုင်ငံတော်၏ သီချင်းအသစ်များApp
ဧဝံဂေလိ အရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းလိုင်းများ :+959-441-136-387
ဤဗီဒီယိုမှ တစ်ချို့အကြောင်းအရာများသည် အင်တာနက်မှ ဖြစ်သည်။
Oromo gospel song/christian Fellowship(OCF) Choir 2015
Sang Pi အရာရာ myanmar gospel song 2018
myanmar gospel song 2019
Myanmar Gospel song ( Jesus )
Myanmar Gospel Song New: ရိုးရိုးလေးဘဲ ကောင်းတယ်
Myanmar Gospel Song 8 Akuk ခရစ်စမတ်ရစ်မူးတဲ့သူ